Baxreyn oo War kasoo saartay Qaraxii Is-miidaaminta ee ka dhacay Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Baxreyn oo War kasoo saartay Qaraxii Is-miidaaminta ee ka dhacay Muqdisho
Baxreyn oo War kasoo saartay Qaraxii Is-miidaaminta ee ka dhacay Muqdisho
Dowladda Baxrayn ayaa ka hadashay qaraxii Is-miidaaminta ahaa ee maalin kahor ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Macalin nuur ee degmada Dharkeenley ku dhow Isgoyska Ex-koontarool Afgooye.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Baxrayn ayaa lagu Cambareeyay qaraxii Is-miidaaminta ahaa oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa goob laga raaco gaadiidka aada degmada Afgooye.
Baxrayn ayaa taci u dirtay qoysaska dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Muqdisha iyo dowladda Federaalka Soomaaliya, iyagoona Caafimaad deg deg ah u rajeeyay dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxaas oo lagu daiibayo Xarumo Caafimaad.
“Baxrayn waxay tacsi u dirteysaa qoysaska dadkii ku dhintay qaraxa, Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyagoo caafimaad deg deg ah u rajeynaya kuwa ku dhaawacmay, weerarkan fulaynimada ah ee argagixiso ee ka hor imanaya dhammaan qiyamka anshaxa iyo bani’aadamnimada iyo mabaadi’da” ayaa lagu yiri Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Sidoo kale Dowladda Baxrayn ayaa xaqiijisay inay taageersan yihiin ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay dowladda Federaalka u qaadeyso dhinaca la dagaalanka Al-shabaab.
Inta la xaqiijiyay saddex qof ayaa ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xaafadda Macalin nuur ee degmada Dharkeenley ku dhow Isgoyska Ex-koontarool Afgooye, waxaana ku dhaawacmay 23 qof ah oo dhammaantood shacab ah ahaa, kuna ku sugnaa goob laga raaco gaadiidka.
Maqaal horeImaaraadka Carabta iyo QM oo kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda Somalia
Maqaal XigaMadaxweyne Axmed Madoobe oo magacaabay Guddoomiye cusub